Uyikhuphelela njani iClasseViva kwi-PC, kwi-Emulator.online ▷ 🥇
Uyikhuphelela njani iClasseViva kwi-PC
Kuba isikolo somntwana wakho sithathe isigqibo sokwamkelwa kobhaliso lwe-elektroniki ClasseViva, uhlala usebenzisa usetyenziso olukhethekileyo lwee-smartphones kunye neetafile ukufunda unxibelelwano lootitshala, jonga amanqanaba omntwana wakho kwaye uthethelele ukungabikho kwabo. Kutshanje, nangona kunjalo, ufumanise ukuba kunokwenzeka ukuba wenze konke oku ukusuka ikhomputha yakho. Ke ngoko, uzame ukufikelela kwinkonzo kwikhompyuter yakho, kodwa zonke iinzame zakho zokukhuphela iClasseViva khange zivelise iziphumo ezinqwenelekayo.
Ngaba yinyani? Ke mandikuxelele ukuba ufike endaweni efanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Kule mihlathi ilandelayo yesi sikhokelo, enyanisweni, ndiza kukucacisela indlela yokukhuphela iClasseViva kwi-PC ukukunika lonke ulwazi oludingayo ukuze uphumelele. Okokuqala, uya kufumana inkqubo eneenkcukacha zokufikelela kwiClashseViva irekhodi elektroniki kwisikhangeli, eyinkqubo oqhele ukuyisebenzisa ukukhangela kwi-Intanethi. Apha ngezantsi, ndiza kukubonelela ngemiyalelo eneenkcukacha zokukhuphela kwiPC yakho. ClasseViva Famiglia mi Abafundi beClasseViva, ii-aplikeshini ze-smartphone ezivumela abazali kunye nabafundi ukuba bafumane irekhodi elektroniki
Ukuba uyazibuza ukuba inokwenzeka njani le nto, ndingakuxelela kwangoko: sebenzisa nje isoftware ekhethekileyo ekuvumela ukuba usebenzise usetyenziso kunye nemidlalo eyenzelwe iWindows kwiWindows nakwiMacOS. Ukuba yile nto kanye oyifunayo kwaye ufuna ukwazi ngakumbi, masingayi phambili kwaye sibone ukuba siqhubeka njani. Ukufunda okuvuyisayo kunye nenhlanhla kuyo yonke into!
Ufikelela njani kwiClasseViva ngokusebenzisa isikhangeli
Ungasikhuphela njani isicelo seClasseViva Spaggiari kwi-PC
Uyikhuphelela njani iClasseViva Famiglia kwi-PC
Uyikhuphelela njani iClasseViva Studenti kwi-PC
Phambi kokuba ufike entliziyweni yesi sifundo kwaye usichaze ngokweenkcukacha indlela yokukhuphela iClasseViva kwi-PCMakhe ndikunike ulwazi lokuqala ngendlela yokufikelela kwiqonga ekubhekiswa kulo.
IClasseViva yirekhodi yesikolo elektroniki (ephuhliswe liQela leSpaggiari) elinikezelwe kootitshala, kwiintsapho nakwabafundi. IkhompyuterInkonzo ekuthethwa ngayo inokusetyenziswa ngaphandle kokukhuphela nasiphi na isoftware, kuba ifikeleleka ngokuthe ngqo kwisikhangeli: yanele ukunxibelelana newebhusayithi esemthethweni efanelekileyo kunye nokufikelela kwidatha ebonelelwe sisikolo xa isikolo sigqibe ekubeni samkele irejista umbuzo.
Njengoko usazi kakuhle, iClasseViva ikwafumaneka ngohlobo lwe isicelo see-smartphones kunye neetafile. Ukuya kwiinkcukacha ezithe kratya, ClasseViva Famiglia (I-Android / i-iPhone / i-iPad) sisicelo esinikezelwe kubazali esibavumela ukuba bathethelele ukungabikho, ukujonga amanqaku, udliwanondlebe lwencwadi nootitshala, njl. Abafundi beClasseViva (I-Android / i-iPhone / i-iPad) sisicelo esivumela abafundi ukuba basebenzise iinkonzo zerekhodi ye-elektroniki, ezinje ngokukhuphela izinto zokufunda kwaye, kubafundi abakwiminyaka esemthethweni, ukuthethelela ukungabikho kwabo, ngelixa Ootitshala beClasseViva (I-Android / i-iPhone / i-iPad) sisicelo esivumela ootitshala ukuba bathathe iimviwo, bafake amanqaku oluleko, badibanise amabakala nokunye okuninzi.
Inguqulelo yeWebhu yeClasseViva kunye nokusetyenziswa endikubonisileyo kusenokwenzeka ukuba kuyilo olufanayo lwegraphic kunye nokusebenza okufanayo. Oko kwathiwa, ukuba nangasiphi na isizathu kufuneka ukhuphele ii-ClasseViva usetyenziso lwee-smartphones kunye neetafile ngokuthe ngqo kwiPC yakho, ungaxhomekeka I-emulator ye-AndroidIsoftware ekuvumela ukuba ukhuphele kwaye usebenzise zonke usetyenziso olwenzelwe ii-smartphones kunye neetafile ezixhotyiswe ngenkqubo yokusebenza yeerobhothi eluhlaza kwiWindows nakwiMacOS. Ngaba yonke into icacile ukuza kuthi ga ngoku? Kulungile ke masenze.
Ukufikelela kwiRekhseViva irekhodi elektroniki elivela kwikhompyuter, nokuba ungutitshala okanye ungumzali okanye umfundi, qalisa isikhangeli oqhele ukusisebenzisa kwi-Intanethi (ex. I-Chrome, Umda, Firefox, safari njl.) Kwaye iqhagamshelwe kwiwebhusayithi esemthethweni yeClasseViva.
Ngoku, ngenisa iziqinisekiso zakho zokungena emasimini Ikhowudi yakho / i-imeyile / ubungqina mi password kwaye ucofe iqhosha Isiqinisekiso, Ukungena nokufaka irekhodi elektroniki.
Ukuba kwelinye icala awukangeni kwiClasseViva okokuqala, fumana ifayile ye-Imeyli ukuba isikolo sikuthumele kwaye ucofe ikhonkco lokungena iqulethwe kuyo. Kwiphepha elitsha elivuliweyo, yenza iphasiwedi eya kuthi isetyenziselwe ukufikelela kwirekhodi ye-elektroniki, ukuyifaka emasimini Ngenisa iphasiwedi mi Qinisekisa isiQinisekiso (ubuncinci oonobumba abasi-8, kubandakanya unobumba omncinci, unobumba omnye, unobumba omnye, kunye noonobumba abakhethekileyo), beka uphawu lokujonga ecaleni kukhetho Andinguye robhothi kwaye cinezela iqhosha Isiqinisekiso.
Okwangoku, thayipha u- igama lomsebenzisi iboniswe kwiscreen, cofa umba Ukufikelela kwirejista ye-elektroniki yeClasseViva kwaye, kwiscreen esitsha esibonakalayo, faka idatha oyenzileyo emasimini Ikhowudi yakho / i-imeyile / ubungqina mi password. Okokugqibela, cinezela iqhosha Isiqinisekiso, ukungena nokusebenzisa iinkonzo zobhaliso zombane.
Ukuba uthathe isigqibo Khuphela usetyenziso lweClasseViva Spaggiari kwiPC yakhoNjengoko kukhankanyiwe kwimigca yokuvula yesi sikhokelo, kuya kufuneka uthembele kwi-emulator ye-Android. Ndincoma ngokwam BlueStacksnanjengoko iphakathi kwezona zidumileyo naphakathi kwabo baqhuba kakuhle kakhulu (ngakumbi kwimidlalo, efuna izixhobo ezingaphezulu). Fumana yonke into ichazwe ngokweenkcukacha apha ngezantsi.
por khuphela i-ClasseViva Famiglia kwi-PCOkokuqala, qhagamshela kwiwebhusayithi esemthethweni yeBlueStacks kwaye ucofe iqhosha Khuphela iBlueStacks [inguqulelo]Ekunene phezulu ukuqala ukukhuphela isoftware ekuthethwa ngayo.
Ukukhuphela ngokupheleleyo, ukuba unayo IWindows yeWindows, cofa kabini kwifayile BlueStacksInstaller_ [uhlobo] .exe, cinezela iqhosha ewe, ukuvumela inkqubo ukuba yenze utshintsho kwikhompyuter yakho, kwaye ukhethe ukhetho Faka ngoku, ukuqala ukufakwa.
Ewe, kwelinye icala, ine a IMac, vula i .netg iphakheji Fumana ucofe kabini kwiI-icon ye-BlueStacks ngaphakathi kuyo, cofa amaqhosha Vula mi Faka ngokuNgena password yeakhawunti yakho yomsebenzisi kwi-macOS kwaye ucofe iqhosha Ukufakwa kwe-wizard, ukuqala ukufakwa.
Kuzo zombini iimeko, linda ukuba ibha yenkqubela phambili ifike kwi-100% (ingathatha imizuzu embalwa) ukuze le nkqubo ifake kwaye iqale ngokuzenzekelayo. Okwangoku, cofa iqhosha Iyaqala Kwaye, kwiscreen ukuya Google Playcinezela amaqhosha Bhaliso mi Ngena, Ukungena ngeakhawunti yakho kaGoogle: emva koko faka idatha emasimini Idilesi ye-imeyile okanye inombolo yomnxeba mi Ngenisa iphasiwedi yakho kwaye ucofe iqhosha Phambili.
Ngoku, kwisikrini esikhulu seBlueStacks, yazisa ifayile ye Ivenkile yokudlala Ngokucinezela i icon yayo (ukuba usebenzisa iMac, qala ukhethe ithebhu Izicelo zam), chwetheza "ClasseViva Famiglia" ebaleni Khangela usetyenziso kunye nemidlalo ibekwe phezulu kwaye cinezela iqhosha Ngena kwibhodi yezitshixo ukujonga iziphumo zokukhangela. Emva koko khangela usetyenziso oluchaphazelekayo (kufuneka lube sisiphumo sokuqala), cofa iqhosha elihambelanayo Faka kwi-pc kwaye ulinde ukukhuphela kunye nokufakela ukugqiba.
Okwangoku, cofa iqhosha Vula okanye ngaphakathiI-ClasseViva Famiglia icon into oyifumanayo kwiscreen Imidlalo yam (kwi-Mac kunjalo Izicelo zam), Ngenisa iziqinisekiso zakho zokungena emasimini Umsebenzisi / i-imeyile mi password kwaye cinezela iqhosha Ukufikelela, ukufikelela kwirekhodi elektroniki kwaye usebenzise iinkonzo ezinikezelwe kubazali babafundi.
Inkqubo ye khuphela i-ClasseViva Studenti kwi-PC iphantse yafana nale ndiyibonisileyo kwimigca yangaphambili enikezelwe ukukhuphela iClasseViva Famiglia kwikhompyuter. Kwakhona, konke okufuneka ukwenze kukukhuphela iBlueStacks, ngena ngeakhawunti yakho kaGoogle, kwaye uqalise ifayile ye Ivenkile yokudlala.
Xa sele kwenziwe, chwetheza "ClasseViva Studenti" ebaleni Khangela usetyenziso kunye nemidlalo ibekwe phezulu kwaye cinezela iqhosha Ngena ikhibhodi. Emva koko chonga Abafundi beClasseViva kwiziphumo zokukhangela (kufanele ukuba ibe sisiphumo sokuqala), cofa iqhosha Faka kwi-pc kwaye emva kokuba ukhuphelo lugqityiwe, cofa kwindawo okhetha kuyo Vula, ukuqala isicelo kumbuzo.
Kwisikrini Ukufikelela, faka idatha ehambelana neakhawunti yakho kumasimu Umsebenzisi / i-imeyile mi password kwaye ucofe ukhetho Ukufikelela, ukufikelela kwiClasseViva Studenti. Inyaniso elula?